Iileta eziGqwesileyo zeTypographic for Logo Ukwenza: Imigca yelogo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Olona hlobo lubalaseleyo lokwenza iilogo
Ngokunyuka kwamashishini akwi-Intanethi, imfuno yoyilo loyilo lokukhulisa umongo weshishini kwi logo kubalulekile. Ngoku amashishini amaninzi eza kwi-Intanethi, hayi ii-eCommerces kuphela, kodwa nezinye iintlobo zamaphepha ewebhu, zonke zinezidingo ezifanayo: ukwenza ilogo. Kwaye njengomyili, kuya kufuneka ube ulungile Iifonti zeelogo ezanelisa bonke abathengi bakho.
Ngesi sizathu, namhlanje siza kugxila ekunikeni iifonti ezahlukeneyo zelogo, ayisiyiyo kuphela eyona ilungileyo, kodwa yezo zifunwa kakhulu, ezo zisimahla, ezo ziya kunika olona phawu lubalulekileyo kwiprojekthi yakho… Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi esizikhethileyo?
1 Iimpawu zeefonti zeelogo
2 Iindidi zeefonti yokuthayipha yeelogo
3 Iifonti zelogo: ezi zezona zibalaseleyo
3.3 IiNunito Sans
3.4 Iifonti zeLogo: Didot
3.7 Iifonti zelogo: Sabo
3.8 Iinkwenkwezi zerokhu
Iimpawu zeefonti zeelogo
Ukukhetha ifonti yeelogo izandi kulula, kodwa ayisiyiyo kwaphela. Ezi ntlobo zeefonti zeelogo kufuneka zibe noluhlu lweempawu ukuze zizalisekise ngokugqibeleleyo umsebenzi wazo. Zintoni ezo? Kulungile:
Kuya kuba lula ukuyibona kwaye unamathele kwimemori yakho. Ngamanye amagama, xa uyibona, uyichonga kunye nenkampani ethiywe ngayo. Ukuba ubeka i-logo edibeneyo, kunye nefonti engaqondakaliyo, kuya kuba nzima ukungena kuluntu.
Okungaphantsi kuninzi. Kukwimigca yokuchwetheza. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba umthombo omnye, okanye ubuninzi, ungaphezulu ngokwaneleyo. Ukuba usebenzisa ngakumbi uyakwenza ukuba ungathembi kubathengi. Ukuba umthengi wakho yinkampani enkulu, ukubheja usebenzisa uhlobo olunye kuphela. Kwelinye icala, ukuba ziinkampani ezincinci, ungabeka ifonti kwigama lenkampani kunye nenye kwisilogeni (ukuba inayo).
Yiya kwiklasikhi. Kungenzeka ukuba umxhasi wakho afune ukusebenzisa uhlobo lwefonti esefashonini, nokuba kungenxa yokuba uyibonile, uyifundile, njl. Zama ukuyikhupha entlokweni yakho. Ifashoni iyadlula kwaye ekugqibeleni ilogo yakho iya kuba nomhla wokuphelelwa kwayo, ke emva kwexesha elifutshane kuya kufuneka uyitshintshe kuba izakuphelelwa lixesha.
Iindidi zeefonti yokuthayipha yeelogo
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo kukuba, ngaphakathi kweefonti, kukho iintlobo ezininzi zeefonti, ezibekwe ngokwamaqela amakhulu ama-5:
Iifonti zeSerif. Zizona zakudala kunye nezindala, kuba sithetha ngenkulungwane ye-XNUMX (ukusukela ngaloo mhla baqala ukusetyenziswa). Ngokuyisebenzisa kwilogo, uya kuyinika inkangeleko yolondolozo, nangona oko kungathethi ukuba kukudala, kodwa kuhle kwaye kuyinkimbinkimbi.
Iifonti zeSans Serif. Oku kuya ngakumbi kwiziseko, kususwe izihombiso zangaphambili kwaye kujonge ukuba nemigca ethe tye necocekileyo. Injongo yayo kukucacisa kwaye kube lula ukuyiqonda kwaye wazi ukuba ilogo leyo ibhekisa phi kuyo.
I-Slab Serif typeface. Lo mthombo, owahlukileyo kowangaphambili, wavela ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye uphawuleka ngokudityaniswa kwezi zimbini zingasentla. Ifuna ukuba nefuthe elibonakalayo lokujonga kodwa kwangaxeshanye ukuphucula la maxesha. Zijikeleze ngakumbi okanye zirhangqile, azikho nkqo njengezinye. Ngokunjalo, badlulisela ukuzithemba kwi-brand kunye nobuchule.
Iifonti zeskripthi. Ezi ziqale ukuvela ngenkulungwane yamashumi amabini kwaye zatsala umdla omkhulu ngakumbi kumbhalo "wesandla". Into ababeyikhangela kukuba ngoonobumba abathi, bebodwa, sele benempumelelo, uyilo olwahlukileyo, njl. Injongo, ngezo curvy, iipateni ezimileyo, kukudala ubuchule kunye nokuyila.
Bonisa imithombo yolwazi. Ikwabizwa ngokuba yimigca yokuhombisa, into abayikhangelayo kukuba oonobumba ngokwabo bayilo, ngohlobo lokuba idlalwe kunye nelogo eyilelwe ngokupheleleyo (oonobumba akufuneki babe ziifonti, kodwa kunoko ibe yiprojekthi). Malunga nokuchaza kwabo, bafuna ukunika uluvo lokonwaba, ukonwaba kunye nento engekho sesikweni.
Iifonti zelogo: ezi zezona zibalaseleyo
Kwaye ngoku, makhe sijonge ukuba loluphi uhlobo lweefonti zeelogo esinokuzicebisa.
Le yifonti yeelogo ozibonileyo kwi-brand eyaziwa kakhulu kuye wonke umntu, ngakumbi ukuba uyayithanda ifashoni. Sithetha ngeVOGUE. I-logo yayo inale fonti kwaye yenye yezona zinto zisetyenziselwa amashishini ahambelana nefashoni, ubuhle, ubunewunewu, ubuhle, njl.
UGaramond ngu typography esetyenziswa kakhulu kwiincwadi, kuba inoyilo oluhle kwaye ayisiyonto ilula okanye elula. Le nayo inempumelelo ngasemva kwayo.
Ixesha lokuqala lokunikezelwa kwayo kwakungo-1900, ngakumbi kwiHlabathi yeHlabathi eParis, kwaye kancinci kancinci yenza umngxunya kwimihla ngemihla. Iyacacisa kwaye isetyenziswe ngokulula kwii-logos ezinobungcali okanye ezifuna ukunika ukungaphelelwa lixesha kwiimpawu zazo.
Njengoko igama lisitsho, le fonti ayi-sans-serif. Yi kubaluleke kakhulu ukuba kubhejwa kwimigca ecacileyo, ayinamandla kakhulu, kwaye icacile ukuba ifundwe. Yeyiphi, yemiboniso, egqibeleleyo.
Iifonti zeLogo: Didot
Ifonti kaDidot ibonakala kwilogo yeGiorgio Armani. Ukuba ubeka ingqalelo, Luhlobo lweSerif kwaye luyila ngokwalo uyilo oluhle nolunononophelo, into oyifunayo kukugxila kubaphulaphuli abaqolileyo.
Kulabo bafuna uyilo lwala maxesha, olwaphula kancinci ngemigca ethe tye kwaye ngokwalo kubonakala ngathi lutsaliwe, uneCanilari. Yifonti etyebileyo kunye noyilo.
Le fonti yenye yezo zisetyenziselwa ixesha elide Iifowusta zemidlalo bhanyabhanya yaseMelika, kwaye yeyona nto uyithandayo kubayili. Ijolise ikakhulu kuhlobo olunye lweshishini, kuba isitayile sayo sindala kwaye sinokulungela kakhulu amagqwetha, imicimbi enxulumene nokufa, inkolo, njl.
Iifonti zelogo: Sabo
Ukuba umxhasi wakho ufuna iprojekthi enxulumene namagama evidiyo, oku, Uhlobo lweArcade, inokuba luncedo. Ngenxa yoyilo olufanayo luyonwabisa uninzi kwaye unokulugcwalisa (kangangokuba alubonakali ngathi luluhlu kodwa lufana nomyili, umdwelisi weenkqubo, njlnjl okanye kwi-Intanethi, apho ingulowo unika intsingiselo kumthombo
Omnye wemithombo yohlobo lweelogos yile, ejonge Uvelwano ngabaphulaphuli abancinci kwaye udlulise ukutsha, ubuchule kunye nokonwaba. Ukuba iprojekthi osiphetheyo yeyabaphulaphuli abancinci, le inokuba yenye yezo ukuzama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Olona hlobo lubalaseleyo lokwenza iilogo